UPDATE: Sarkaal la shaqeyn jiray Mareykanka oo lagu dilay Muqdisho +Magaciisa | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Sarkaal la shaqeyn jiray Mareykanka oo lagu dilay Muqdisho +Magaciisa
UPDATE: Sarkaal la shaqeyn jiray Mareykanka oo lagu dilay Muqdisho +Magaciisa
Muqdisho (Halqaran.com) – Maleeshiyaad ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa xalay Magaaladda Muqdisho ku dilay Sarkaal ka tirsanaa Dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Mareykanka uu tababaray.
Dilkaan ayaa ka dhacay Xaafada Seybiyaano Degmadda Hodan ee Gobolka banaadir.
Sida ay mareegta Halqaran.com u xaqiijiyeen goobjooogayaal, dhalinyaro bastooladdao ku hubeysneyd ayaa fuliyay dilka waxayna ka baxsadeen goobta uu dilka ka dhacay,waxayna horey usii qaataan Bastooladd uu watay.
Maleeshiyaadka Al-shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda dilka sarkaalka.
“Al-Shabaab ayaa degmada Hodon ku khaarijiyay Muuse Abukar Axmad Nuuroow oo katirsanaa Ciidamadda Bangarafaata wuxuu cadowga kusoo hogaamin jiray deegaanno katirsan Sh/hoose” ayaa lagu yiri war kooban oo maleeshiyaadka Al-Shabaab kasoo baxay.
lagu dilay Muqdisho
Sarkaal la shaqeyn jiray Mareykanka